सामसुङ ग्यालेक्सी ए–८ नेपाली बजारमा | .:: Welcome || Paryatannews
Home » अर्थ » सामसुङ ग्यालेक्सी ए–८ नेपाली बजारमा
सामसुङ ग्यालेक्सी ए–८ नेपाली बजारमा
काठमाडौं । सामसुङ कम्पनीले नया“ मोबाइल ग्यालेक्सी ए–८ नेपाली बजारमा भिœयाएको छ ।
कम्पनीले नेपाली बजारमा ल्याएको हालसम्मकै पालतो मानिएको स्मार्ट फोनको मोटाइ ५.९ मिमि छ । ५.७ इन्च स्क्रिनको ग्यालेक्सी ए–८ सेट सुपर एमोलेड फुल एचडी डिस्प्लेमा रहेको छ । हार्डवेयर १.५ जिएचजेड ओक्टाकोर र क्वालकम स्न्यापड्रयागन ६१५ प्रोसेसरको छ । २ जिबी ¥याम सुविधाको सेटमा १६ जिबी तथा ३२ जिबी इन्टर्नल मेमोरी रहेकामा १२८ जिबीसम्म बढाउन मिल्नेछ ।
सेटमा अगाडिको क्यामरा ५ मेगापिक्सेल र पछाडि १६ मेगापिक्सेलको रहेको कम्पनीले जनाएको छ । अपरेटिङ सिस्टम–एन्ड्रोइड ५.१.१ ललिपपमा चल्ने सेटमा मेटलबडी, फिंगरप्रिन्ट सेन्सर, फोरजी वाइफाई, जिपिएस, ब्लुटुथलगायत विशेषता छन् ।
सामसुङ ग्यालेक्सी ए–८ नेपाली बजारमा Reviewed by Shiva Shrestha on Sep 18 . काठमाडौं । सामसुङ कम्पनीले नया“ मोबाइल ग्यालेक्सी ए–८ नेपाली बजारमा भिœयाएको छ । कम्पनीले नेपाली बजारमा ल्याएको हालसम्मकै पालतो मानिएको स्मार्ट फोनको मोटाइ ५.९ काठमाडौं । सामसुङ कम्पनीले नया“ मोबाइल ग्यालेक्सी ए–८ नेपाली बजारमा भिœयाएको छ । कम्पनीले नेपाली बजारमा ल्याएको हालसम्मकै पालतो मानिएको स्मार्ट फोनको मोटाइ ५.९ Rating: 0